Adda Bilisummaa Oromoo: 'Naannoo mana jireenyaa Daawud Ibsaa humni hidhate buufatee jira' - BBC News Afaan Oromoo
Adda Bilisummaa Oromoo: 'Naannoo mana jireenyaa Daawud Ibsaa humni hidhate buufatee jira'
26 Adooleessa 2020
Naannoon mana jireenyaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Daawuud Ibsaa, poolisii federaalaatiin marfamee akka jiru Itti gaafatamaan waajjira hayyu duree ABO Gadaa Oljiraa BBCtti himan.
''Humni hidhate - poolisii federaalaa buufatee jira. Seenuufi bahuun dhoorkaadha. Yoo bahellee ni to'atama,'' jechuun isaanis guyyaa sadiin dura guyyaa tokkoof to'atamanii akka gadhiifaman dubbatu.
''Hayyu dureen to'annaa poolisii jala jiru. Socho'anii hojiisaanii idilee hojjechaa hinjiran,'' kan jedhan Obbo Gadaan, maatiin isaanis bahuufi galuu dhorkameera jedhu.
Bilbilli Obbo Daawudis guyyaa sadiin dura hojjechuu akka dhaabees nutti himan.
'Mootummaan Itoophiyaa haala namoota hidhamanii ifatti beeksisuu qaba'
Sababa poolisiin achi buufatee jiru waajjirri isaanii quba qabaachuu kan gaafanne obbo Gadaan, ''Poolisoota achuma jiran irraa akka odeeffanneetti, "nageenya keessan eeguudhaaf jedhameetu, nuun jedhan jalqaba,'' kan jedhan itti gaafatamaan kun, ''namni bahee akka hin hojjenne dhorkuun nageenya eeguu hin fakkaatu,'' jedhu.
Qunnamtiin bilbilaas irraa waan citeef odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye jedhu. ''Bilbilaan dubbisnee maalirra jirtu jechuu hin dandeenyu. Kan bahees ol galuu hin danda'u. Haala rakkisaa keessa jiru,'' jedhan.
Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Jeeylaan Abdii waa'ee dhimma kanaa haga yoonaatti odeeffannoo tokkoollee akka hinqabne BBCtti himaniiru.
Dhimma 'walga'ii waamamee'...
Gama kaaniin ibsa dhaabichi fuula Facebook isaa gubbaa baaseen ''Walga'ii atattamaa kan Gumii Sabaa qaamni waame jira jedhamuu dhaga'aa jirra,'' jechuun ''hoggansii walga'ii waamuuf aangoo seeraa qabu waamame kan hin jirree ta'uu asumaan isiin hubachiifna" jedhaniiru.
Dhimma kanarratti kan gaafanne Obbo Gadaan ''qaamni walgahii godhanna jedhe tureera. Bakka hayyu dureen dhaabichaa to'annaa jala jiranitti, walgahiin gaggeeffamu kamuu sirrii miti jennee amanna,'' jedhaniiru.
''Akka itti gaafatamaa waajjiraatti adeemsi kun sirrii miti jedheen yaada.''
Ajjeechaa Haaacaaluu Hundeessaa hordofuun qondaaltonni olaanoo dhaabichaa to'annoo jala oolanis bakki isaan itti hidhamanii jiran dhaabichi haga ammaa akka hinbeeknes qondaalli kun ni dubbatu.
''Abukaatoon silaa dhaabbatee ittisa gochuuf bakki isaan itti hidhaman hin beekamu, dhimmi isaan ittiin himatamanis hin beekamne,'' jechuun waliigaltti haala jarri keessa jiran akka hin beekamnes dubbatu.
Amnesty International gabaasa torban dabre keessa baaseen qondaaltonni dhaabichaaa kanneen akka Mikaa'el Booran, Shigguux Galataa, Lammii Beenyaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'i guyyoota garagaraatti qabamuun eessa akka jiran hin beekamu jedhan.
Abukaatonni jaraa Aminastii Intarnaashinaalitti akka himanitti, Komishinoota poolisii Federaalaa, Finfinneefi Oromiyaa gaafatanis, jarreen kana to'annoo jala oolchuu haalaniiru.
Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo kan biraa- Abdii Raggaasaa ammoo ji'ootaan dura hidhame, eessa akka jiru akka hinbeekne abukaatoon isaa himaniiru.
Siyaasa Itoophiyaa: Namoonni Aanaa Jibaatitti to'ataman nyaata lagachuun 'of dadhabuu' maatiin himan
22 Adooleessa 2020
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa garee dhiittaa mirgaa hordofu hundeessuusaa ibse
24 Adooleessa 2020
Amnesty International: 'Itoophiyaan iddoofi haala namoonni hidhaman keessa jiran ifatti beeksisuu qabdi'
18 Adooleessa 2020
Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa: Obbo Dajanee Xaafaafi Kol. Gammachuu Ayyaanaa to'annoo jala oolan
7 Adooleessa 2020
Ajeechaa Haacaaluu - ibsi haadha alangaa 'shakkii uume'
11 Adooleessa 2020
Aang Saan Suu Kii hidhaan waggaa afurii itti murtaa'e
Waraanni Itoophiyaa Kamisee, kaan finciltoota TPLF jalaa baasuu mootummaan hime
5 Muddee 2021
Kaadhimamtoota Badhaasa Ispoortessaa Cimaa Afrikaa BBC bara 2021
Xiyyaarota nam-maleeyyii dirree waraanaatti akkaataa lolaa jijjiiraa jiran
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Hagayya 2021
Lammiin Sirilaankaa amantii arrabse jedhamee haala sukaneeessan ajjeefamuun dheekkamsa kaase
Shamarree maqaa jaalalaatiin xaarii waggaa jahaa dhabde
'Weerarri koroonaatti aanee dhufu baay'ee hamaa taha' - Saaraa Jiilbert
Taalibaan, IS fi al-Qaayidaa garaagarummaan isaanii maali?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 5 Fuulbaana 2021
Gaa'illii fi fayyummaan hariiroo qabaatu laata?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 3 Sadaasa 2017